Baadhitaankii Samsung ee dabkii Note 7 ayaa dhammaaday | Wararka IPhone
Baadhitaankii Samsung ee dabkii Note 7 ayaa dhammaaday
Saabuunta opera ee Samsung Galaxy Note 7 ee suuqa loogala baxay qaraxyada, dabka iyo dhibaatooyin kale, ayaa soo afjarmaya. Koonfurta Kuuriya lafteeda ayaa horeyba u sharaxday inay xallin doonaan kiiska isla bilawgii sanadka isla markaana ereyadeedii la fuliyay, dhibaatada bateriga dab qabsada waa meesha yar ee udhaxeysa batteriga iyo qeybaha kale ee gudaha aaladda.
Runtu waxay tahay in naqshadda qalooca ee qalabkan xagga hore iyo xagga dambeba, ay ka dhigayaan in waxyaabaha gudaha ka jira ay "wada" yihiin gudaha, sidaa darteedna kala duwanaanshaha heerkulka ee batteriga qalabka ay ku kicin karto dab, laakiin taas maahan sababta markii hore loo yiri.
Maanta miniaturization ka mid ah qaybaha gudaha waa cajiib, laakiin mararka qaar inkasta oo dhammaan horumarka laga gaadhay dareenkan waxaan la kulmi karnaa nashqad xoogaa caddaalad ah oo la dhigayo dhammaantood waana tan saxda ah wixii ku dhacay Samsung Galaxy Note 7. Shirkadda ayaa si rasmi ah u sharraxday in dhibaatada dabku ay si toos ah ugu tiirsan tahay wax yar booska jirka ee gudaha Galaxy Note 7, markaa dhibaato batari ma ahan.
Sikastaba xaalku ha ahaadee, waxa cadaatay kadib bayaankan rasmiga ah ayaa ah in aan waxba laga hari karin iyada oo aan lala jaan qaadin faahfaahinta ugu badan ee qalabkan aan maalin walba adeegsano Arrinta Xusuusin 7 ah marka lagu daro inay waxyeelo maadi ah u geysatay qaar ka mid ah dadka isticmaala waxay madax xanuun dhab ah u noqotay shirkadda Kuuriyada Koonfureed, maadaama ay si dhab ah u taabatay suuqooda iyo iibinta taleefannadooda gacanta dhibaatada darteed. Intaa waxaa dheer, guuldaradan ayaa si buuxda u saameyneysa soo saarista astaanta cusub ee astaanta, taas oo waxaa suurto gal ah inaad dib u dhigto soosaarka Samsung Galaxy S8 ee sanadkan.
Marka la soo koobo, kiis ku dhammaada madax xanuun dhab ah kuwa ay saameysay kuwaas oo lagu qasbay inay soo celiyaan qalabkoodii, qaarkood qasaaraha millionaire ee Samsung iyo wixii ka sarreeyaba dhibaato halis ah sumcadda iyo kalsoonida sumadda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Tartanka » Android » Baadhitaankii Samsung ee dabkii Note 7 ayaa dhammaaday
Martin Luther King waa halyeeyga maanta websaydhka Apple
Nest wuxuu ku dhawaaqayaa imaanshihiisa Isbaanishka alaabteeda "smart"